Diidmada Ellicott | Hogaamiyaha Caalamku ee Nidaamyada Quusta
Khadka Qalabka Ellicott
2000 + Ellicott® calaamadihii duugga ahaa ayaa loo geeyay macaamiisha in ka badan 100 dal.
Hal-abuurnimada iyo Injineerinka
Mashruuc u baahan ujeeddooyinka hawlgalka saxda ah, Ellicott waxay diyaar u tahay inay soo saarto qashin buuxiya shuruudaha saxda ah ee macaamiisheena.
Qeybaha & Adeegga
Waxaan ku siinaa Waaxda Adeegga Macaamiisha ugu dhammaystiran ee warshadaha leh qaybaha ugu tayada wanaagsan iyo farsamo yaqaanno tayo sare leh.
Hogaamiyaha Wershadaha ee Dredges Tayada Dhisay
Dhaqan sharaf leh
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee adduunka ka keena alaab-gooyeyaal dhexdhexaad ah, Ellicott Dredges waxay qaadataa booskeeda suuqa si aad u culus. Qiyamkeena asaasiga ah waxaa lagu soo koobay DNA-da nooc kasta oo Ellicott® ah. Taariikhdeena oo dhan, milkiileyaasha Ellicott® brand dredge waxay barteen in wax soo saarka iyo ku tiirsanaanta ay tahay qaab nololeedkeenna, ma ahan oo keliya odhaah.
Burburinta Ujeeddo Fulinaysa
Warshadaha qodista halkaas oo codsiyadu u kala duwanaan karaan macdanta ciidda/dhagaagga, si loogu isticmaalo...
Degmada Barnstable, Massachusetts, barnaamijka daadinta ayaa dhawaan u dabaaldegay sannad-guuradii 25aad. Gobolka, oo leh...
Ellicott hadda wuu keenay oo bilaabay Taxanaha 370 Dragon® dredge ee shrimp.
Kaliya waxaan rabay inaan dhaho mahadsanid mar labaad, 300 SL Dragon waa mashiin tayo sare leh! Meelo badan oo qashin-gaar ah gaar ahaan “jaranjarooyinka hore ee jiidaha hore” ee biyaha tuuraya inta uu shaqaaluhu isku diyaarinayo goorta xigta, laakiin tan midkan ma ahan. Waxaan awoodnay inaan damino matoorka, annagoo ku riixnaa is baddelaadda, oo aan dejinay, ka dibna u dirno wershadaha culus ee daaweynta dhirta! Waxaan haysannay eber xilli-roobaadka dartiis.
La-tashiga Riley Dredge
Waxaan sidoo kale aad ugu qanacsanahay Brutus [460S dredge], runti waa aragti aan ku arkeyno dukaanada, iyo, shaqada tayada leh, kibirka iyo taxadarka si faahfaahsan ayaa muujineysa sida ay uga go'an tahay kuwa ku lugta leh… Adeegga macmiilka iyo fiirada tafaasiisha sida sidaa darteed waa sababta… Waaxda Kheyraadka Dabeeciga ah ee Ohio waxay ku faanaysaa xiriirka dheer ee aan la leennahay Ellicott Dredges.
Bob Cumbow, Kuxigeenka Madaxa
Beeraha Gobolka Ohio
Laga soo bilaabo 1990, aniga iyo makaanigaygu waxaan la xiriirnay adeegga macaamiisha iyo qaybaha qaybo badan marar badan dhammaan shaqaalaha Ellicott® waxay noola dhaqmeen si ixtiraam iyo sharaf leh. Rudee Inlet II ”dredge wuxuu sifiican ugu adeegay Magaalada Virginia Beach ilaa iyo 1987 ilaa hadana wali wuxuu kujiraa xaalad aad ufiican ilaa maantadan.
Magaalada Virginia Beach
Kormeeraha Howlgalka, Qeybta Wadooyinka Howlaha Guud